Ubuzwe be-Antigua neBarbuda beRendezvous Bay Abelana
Ukuthengiswa kwesabelo senkimbinkimbi yokuthola ubuzwe be-Antigua neBarbuda
Ithimba laseRendezvous Bay lisebenza ngokubambisana nawe ukwakha ikhaya lakho eliyisiqhingi eliyingqayizivele kwelinye lamapaki kazwelonke amahle kakhulu emhlabeni.
Imithetho yokwakhiwa kweRendezvous Bay yenzelwe ukwenza lula ukwakhiwa okuhlanganisa imvelo nendawo yezakhiwo. Ukubukwa okuphefumulayo nomoya opholile wase-tropical kugqamisa izindawo zokuhlala zangaphandle, kuyilapho ubuhle obukhona bukhululekile, bungokwemvelo, izikhala ezingaphelelwa yisikhathi.
Ngokuqina kwesakhiwo esiphansi ngokunethezeka kobumfihlo, wonke amakhaya eRendezvous Bay azoba yindawo yawo yokucasha. Imithetho yokuklama edinga izindawo eziphukile kanye nokubekwa endaweni ebucayi izogcina umndeni nabangane bethokozile, iphinde inikeze ukuphumula nendawo yokuhlala ngaphakathi kwempahla ngayinye.
Umthengi wasekhaya angasebenzisa enye yezinkambiso ezenziwe ngokwezifiso zeRendezvous Bay, enze inguqulo yangokwezifiso, noma aklame ikhaya lakhe, asebenze ngqo namapulani kaRendezvous Bay noma nomakhi wezakhiwo ongakhetha kuye. Amaphrojekthi kufanele alandele ukuholwa okujwayelekile nokwakhiwa kwesiqhingi njengoba kuhlongozwe eMithethweni Yokulawulwa Kwezakhiwo zeRendezvous futhi kuvunywe yiThimba Lokubuyekeza Lokwakha. Ungasebenza nabaklami bangaphakathi nabakwamanye amazwe abakhethayo. Singasiza ekwakhiweni kwethimba lakho lobuciko futhi sizosebenza eduze nabo efeni lakho.
Umqulu Wenhlangano Yomphakathi
Umphakathi waseRendezvous Bay uzophathwa yinqwaba yemithetho ebizwa ngeCommunity Association Bylaws nangeCommunity Association Board of Directors, ezomela ababambe iqhaza emphakathini. Lo mbhalo onemininingwane ubandakanya imigomo yokwakhiwa, ukwakheka nokuphathwa, imithetho yokulawulwa kokuklanywa, imikhawulo yokwakhiwa nokusetshenziswa komgwaqo, izindleko ezijwayelekile, kanye nemininingwane yeNhlangano Yabanini Bezindlu.
Ukubukwa okuphefumulayo nomoya opholile wase-tropical kugqamisa izindawo zokuhlala zangaphandle, kuyilapho ubuhle obukhona bukhululekile, buphila, bungaphelelwa yisikhathi.
Ithimba lokwakha iRendezvous Bay lizobhekana nokuthumela ikhaya ngalinye. Ngabasebenzi abenza isabelomali, iqembu lizosebenza ngqo neklayenti noma uchwepheshe oqokiwe ngenqubo yokwakha ukwakha uhlelo lokugcina lokwakha ikhaya.
Ithimba laseRendezvous Bay lizokwengamela konke ukwakhiwa nosonkontileka bendawo ngokuncintisana futhi lizohlinzeka ngamakhasimende iziqinisekiso zokwakha. Izinsizakalo zokwakhiwa kwezomthetho nezangaphakathi zinganikezwa futhi ngabasebenzi baseRendezvous Bay, noma, njengokuklanywa kwekhaya, iqembu lingasebenza nabachwepheshe abavela eceleni abavela kulezi zinsizakalo ukuletha ikhaya eligcwalisiwe nelinikezwe iklayenti ngalinye.
Buyela Ezakhameni Ngokwezezakhiwo